महिलाहरुले यसरी सिन्दूर लगाएमा अशुभ मानिन्छ !::Leading Nepal News
महिलाहरुले यसरी सिन्दूर लगाएमा अशुभ मानिन्छ !
एजेन्सी । हिन्दू धर्ममा सिन्दूरको निकै नै महत्व हुन्छ । खासगरि बिवाहित महिलाले सिन्दूरलाई आफ्नो सिउँदोमा लगाउने गर्छन् । हिन्दू धर्मको मान्यता अनुसार विवाहित महिलाले सिन्दूर नलगाएमा अशुभ मानिन्छ । सिन्दूर लगाउँदा कतिले गलत तरिकाले लगाउने गर्छन् जसले गर्दा श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा नकरात्मक असर पर्छ । सिन्दूर लगाउँने पनि केही तरिका छन् । पढ्नुहोस्ः
सिन्दूर सिउँदोको बीचमै पर्नेगरी लगाउनु: सिउँदोमा सिन्दूर लगाउँदा सधैँ सिउँदोको बीचमै पर्नीगरि लगाउनुहोस् । यदि कुनै महिलाले सिन्दूर लगाउँदा सिउँदोको बीचमा नभई किनारमा पर्नी गरी लगायो भने श्रीमान् बिस्तारै महिलाबाट टाढिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ ।
छोटो सिन्दुर नलगाउनु: सिन्दूर लगाउँदा सधैँ लामो लगाउनुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । लुकाएर लगाइएको छोटो सिन्दूरले श्रीमानलाई असर गर्ने बताइन्छ । भनिन्छ कि यस्तो गरी सिन्दूर लगाउँदा समाज बिस्तारै यस्ता महिलाका श्रीमानदेखि टाढिन थाल्छन् ।यो पनि पढ्नुहोस्….
यस दिन माइत आएकी छोरीलाई घर नपठाउनुस्, कारण यस्तो छ …
यात्रा गर्नुपूर्व कयौँ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । जोतिषिय मान्यता अनुरुप यात्रा गर्नुपूर्व धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ नत्र यात्रा निकै कष्टकर पनि बन्नसक्छ । जोतिषिय मान्यता अनुसार भर्खरै बिहे भएकी छोरीले बुधबारको दिन माइतबाट घर जानु असुभ हुनसक्छ किनकि चन्द्र यात्राको कारक हुन्छ भने बुध लाभको कारक हुन्छ । ज्योतिषिय जानकारी अनुसार बुध र चंद्र एकअर्काको शत्रु हुन्छन् जसले गर्दा भर्खरै बिहे भएका महिलाहरुलाई बुधबारको दिन यात्रा गर्दा असुभ हुन्छ ।
बुधवार छोरीलाई घर पठाउँदा दुर्घटनाको सम्भावना हुन्छ । यति मात्र नभई छोरीको घरसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ । त्यसैले बुधवारका दिन बुधदेव अनुकूल नहुँदा दुर्घटना वा अनिष्ट हुने सम्भावना बढ्छ ।
तर बुधले पैसा तथा व्यापार बढाउन धेरै नै मद्धत गर्छ । त्यसैले बुधवारको दिन यस्ता काम पनि छन् जसलाई गर्द शुभफल मिल्छ । बुधबारको दिन खाता खोल्नु, बीमा गराउनु, पैसाको लेनदेन गर्नु, गोदाममा सामान भित्र्याउनु आदि काम गर्नु शुभ हुन्छ जसबाट व्यक्ति अझ धनी हुनपुग्छ ।
डरलाग्दो सपना देख्नुहुन्छ ? लसुनलाई यसरी प्रयोग गर्नुहोस् डरबाट मुक्त राख्छ…
अब आफ्नो सुताइको पोजिसनबाटै यसरी थाहा पाउनुस् आफ्नो स्वभाव….
सपना नराम्रो देख्नुभयो, अब यसो गर्नुहोस..
साउनमा माछा मासु किन खानुहुँदैन ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण..
थाहापाइराख्नुहोस- यस्ता गुण भएका युवतीहरु पुरुषका लागि अयोग्य..
के तपाइलाई बिर्सने बानीले सताएको छ ? अपनाउनुहोस् यी उपाय..
शास्त्र भन्छ – यसरी सिरानी राखेर कहिल्यै नसुत्नुहोस्….
साउन महिनामा नगर्नुहोस् यस्तो काम, भगवान शिव रिसाउनुहुन्छ !